နာဘီ ကီတာရဲ့ ဖြတ်ထုတ်မှုကြောင့် ထရက်ဗာ ချာလိုဘာ ဟာ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာပဲ ဒဏ်ရာချုပ်ခဲ့ရကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ တူချယ် - xyznews.co
နာဘီ ကီတာရဲ့ ဖြတ်ထုတ်မှုကြောင့် ထရက်ဗာ ချာလိုဘာ ဟာ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာပဲ ဒဏ်ရာချုပ်ခဲ့ရကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ တူချယ်
ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ အကယ်ဒမီထွက် အင်္ဂလန် လူငယ် ခံစစ်မှူး ထရက်ဗာ ချာလိုဘာ ဟာ ၂လနီးပါး ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမှ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကစားခဲ့တဲ့ လီဗာပူး အသင်းနဲ့ ကာရာဘောင် ဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ ပွဲထွက်ခွင့် ပြန်လည် ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ထိုမတိုင်ခင် က ချာလိုဘာ ဟာ နှစ်သစ် အဖွင့်ပွဲ ဖြစ်တဲ့ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျ က လီဗာပူးနဲ့ တဖက် ၂ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ နောက်ဆုံး ပွဲထွက်ခွင့် ရခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၊ အဲဒီပွဲက ဒဏ်ရာကြောင့် ၄င်းဟာ နောက်ထပ် ပွဲထွက်ခွင့်ကို လိဂ်ဖလား ဖိုင်နယ် အထိ စောင့်ခဲ့ရပါတယ် ။
ကံဆိုးစွာနဲ့ ချာလိုဘာ ဟာ ယင်းဖိုင်နယ်ရဲ့ ဒုတိယပိုင်း အတွင်း လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူ နာဘီ ကီတာရဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဖြတ်ထုတ်မှုကြောင့် ကြီးမားတဲ့ ဒဏ်ရာ တခု ထပ်ရခဲ့ပြီး ၊ ကော့ဘ်ဟမ် လေ့ကျင့်ရေး စင်တာသို့ပင် မပြန်နိုင်ခဲ့ပဲ ၊ ဝင်ဘလေမှ အဝတ်လဲခန်းမှာ ဒဏ်ရာချုပ်ခဲ့ရကြောင်း နည်းပြ ဖြစ်သူ သောမတ်စ် တူချယ် က အခုလိုပဲ ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ် ။
တူချယ် က ” ပွဲပြီးတော့ ကျွန်တော်ဖြင့် ထရက်ဗာရဲ့ အခြေအနေ အပေါ် မယုံနိုင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ သူ့ရဲ့ ဒဏ်ရာကို ချုပ်နေခဲ့တာပါ ။ ကျွန်တော် ဟာသ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ပွဲပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲလည်း လုပ်ပြီးရော ၊ ပြန်ခါနီး အချိန် အထိ သူတို့ဟာ ထရက်ဗာရဲ့ ဒဏ်ရာကို ခွဲစိတ်နေခဲ့ကြပါတယ် ။ ”
” ဒီ ဒဏ်ရာ ချုပ်နေရင်း ၊ ကျွန်တော်ဟာ ထရက်ဗာရဲ့ အော်သံကိုတောင် ကြားခဲ့ရပါသေးတယ် ။ အထဲမှာ သူနဲ့ အသင်းက ဆရာဝန်တွေပဲ ကျန်ခဲ့ပါတယ် ။ တကယ်ပြောတာပါ ။ ထရက်ဗာရဲ့ ဒဏ်ရာ က ကြီးကြီးမားမား ကွဲခဲ့တာပါ ။ ပေါင်ခြံ ဧရိယာနဲ့တောင် အရမ်း နီးစပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒဏ်ရာ က ဟနေခဲ့ပြီး ၊ ပြန်ပိတ်ဖို့ အတွက် ပြန်ချုပ်ဖို့ လိုအပ်ခဲ့တာပါ ။ ”
” ဒီလို ဒဏ်ရာမျိုး ရနေခဲ့တာတောင် သူ ပွဲပြီးတဲ့ အထိ ကစားသွားခဲ့တာကို ကျွန်တော် လုံးဝ မယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ပင်နယ်တီတောင် သူ သွင်းခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒီ ဒဏ်ရာ က အရမ်း ကြီးမားခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ သတ္တိကို ပြသသွားခဲ့တယ်လို့တောင် ကျွန်တော် ပြောရပါမယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒါက အခန့်မသင့်ရင် တခုခု ချွတ်ချော်သွားနိုင်တဲ့ စွန့်စားမှုမျိုးပါ ။ ”
” ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို ချီးကျူးရပါမယ် ။ လောလောဆယ်တော့ မနက်ဖြန်ပွဲကို ဘယ်သူတွေ ကစားနိုင်လဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် ထုတ်ပြောလို့ မရသေးပါဘူး ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသင်းမှာ ဒဏ်ရာရနေတဲ့ ၊ ကြံ့ခိုင်မှု မပြည့်သေးတဲ့ ကစားသမားတွေ ပိုပြီး စုပြုံလာလို့ပါ ။ ”
” ဒီတော့ ကျွန်တော့ အနေနဲ့ လူတန်နဲ့ ပွဲအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုကို မထိခိုက်စေချင်သလို ၊ သတင်း အချက်အလက် အများကြီးလည်း မပေါက်ကြားစေချင်ပါဘူး ။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်နေကြသလို ၊ ထရက်ဗာ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖိုင်နယ်မှာ ပြသခဲ့တဲ့ ရဲစွမ်း သတ္တိ အတွက် ကျွန်တော့ဆီက လေးစားမှုကို အပြည့်အဝ ရလိုက်ပါပြီ ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
ထရက်ဗာ ချာလိုဘာ ကတော့ ဒီ ဒဏ်ရာကြောင့် ကော့ဘ်ဟမ်း လေ့ကျင့်ရေး စင်တာကိုတောင် မသွားရပဲ ၊ ဝင်ဘလေရှိ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ ဒဏ်ရာချုပ်ခဲ့ရပေမယ့် ၊ ဒါကို ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူ နာဘီ ကီတာ ကတော့ အဝါကတ်ပင် မထိခဲ့ပါဘူး ။ VAR ကလည်း ဒီ ဖြတ်ထုတ်မှု ကို ၅၀ – ၅၀ အနေအထားလို့ သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ပုံ ပေါ်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တူချယ် က ” အဆုံးမှာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ နားလည်ရမှာက VAR ဆိုတာဟာလည်း လူတွေကပဲ အသုံးပြုတဲ့ နည်းစနစ် ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါ ။ ဒီတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းမှာ ဟိုနည်းနည်း ၊ ဒီနည်းနည်း အမှားအယွင်းလေးတွေ ရှိကောင်းရှိတတ်ပါတယ် ။ ”
” ဒီအတွက် ခင်ဗျားမှာ ဖြေရှင်းချက် တစုံတရာ မရှိတာကြောင့် ၊ ဒီအတိုင်း လက်သင့်ခံရင်လည်း ခံရမှာပါပဲ ။ ထရက်ဗာ အပေါ် ပြစ်ဒဏ် ကျူးလွန်မှုမှာဆို ဘယ်သူကမှ ဒါကို ၁၀၀% ရည်ရွယ်ရှိတဲ့ ဖြတ်ထုတ်မှုလို့ မသတ်မှတ်ကြပါဘူး ။ ဒီတော့ ဒါက အနီကတ် ပြဖို့ ထိုက်တန်လား ၊ မထိုက်တန်ဘူးလား ? ”
” VAR ကရော ဒီ ဖြစ်ရပ် အတွက် ဝင်ရောက် ဖြေရှင်းဖို့ လိုသလား ၊ မလိုဘူးလား ? ဒီ ငြင်းခုံမှု က ဘယ်တော့မှ ပြီးဆုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါက ဘောလုံးရဲ့ အလှတရားပါပဲ ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီ အားကစားကို ပိုပြီး ကျော်ကြားစေတာပါ ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
Previous Article ယူနိုက်တက် ပြီးတော့ စပါးကို ထပ်ဖြုတ်တဲ့ ဘိုရို ၊ အနားယူတော့မယ့် လက်ဝှေ့စူပါစတား ၊ ဆိုးရှား ရလိုက်တဲ့ လျော်ကြေး တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းမျာ
Next Article အမ်ဘာပေ ကို2နှစ် စာချုပ် အတွက် ယူရို သန်း 200 ပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့ PSG